UNGAPHUMELELA PHI KWIMIDLALO ENYE YENGOZI? - UMNGCIPHEKO
Yimalini onokuyiphumelela kwisiGaba esinye seNgozi!?
Ubungozi! umphathi UAlex Trebek wavela IPodcast yeNerdist kutshanje . Ludliwanondlebe olunomdla ngokwenene, kwaye ukuba unayo iyure enesiqingatha sokubulala, yindlela entle yokwenza oko. Ngesinye isikhathi umphathi uChris Hardwick wayezibuza ukuba ngowuphi umdlali ophumeleleyo kwisiqendu esinye, ke senza izibalo.
Ngokwazo zombini I-Wikipedia kunye noTrbek kwi I-Nerdist isiqendu ekuthethwa ngaso, irekhodi langoku lemali eninzi efunyenwe kumdlalo omnye we Ubungozi! yi- $ 77,000. Kuyamangalisa oko, kodwa ukuba okhuphisanayo ngumdibaniso wethamsanqa elimangalisayo, ukukhawuleza, kunye nokukhawuleza nge-buzzer banokwenza okungakumbi.
Okokuqala, ukuqala ngokukhawuleza ukuba awuqhelekanga Ubungozi! okanye ukuba khange ubukele ixesha elithile. Ndiza kuthintela ukucaphula ukuze kube lula ukutsiba ngaphambili ukuba sele uqhelene
isuti entsha 52
Kukho imijikelo emithathu; Ingozi, Ubungozi obubini, kunye neNgozi yokugqibela. Imijikelezo emibini yokuqala ineendidi ezintandathu zeempawu ezintlanu nganye, kwaye iNgozi yokugqibela iyinto enye. Icandelo ngalinye kumjikelo weJoopardy linemibuzo ngokunyuka kwamaxabiso edola angama- $ 200, $ 400, $ 600, $ 800, kunye ne- $ 1000. Abo baphindwe kabini kwiJoopardy ephindwe kabini (kungoko igama) ukuya kuthi ga kwi-400, $ 800, $ 1200, $ 1600, kunye ne-2000.
Kumjikelo wobungozi inqaku elinye liyimfihlo ngokufihlakeleyo yeDaily Double evumela umdlali ukuba ayikhethele ukubheja nasiphi na isixa setotali yabo yangoku ekufumaneni impendulo ngokuchanekileyo kodwa enganiki xabiso lesalathiso ebhodini. I-Double Double eyiyo yonke imihla kuxa umdlali ebheja isambuku sombuzo. Ukuba bayifumene ngokuchanekileyo, iyonke iphindwe kabini. Zimbini iindlela zokufumana imihla ngemihla kumjikelo ophindwe kabini weengozi. Abadlali abazi ukuba zeziphi izikhombisi ezichongiweyo njengeDaily Doubles kude kube kukhethwe umkhondo kumdlalo.
Kumdlalo wokugqibela weJeopardy abadlali babheja nayiphi na imali yokuwina kwabo emva kokuva kuphela udidi lomkhondo, kwaye bayakwazi ukuphinda-phinda impumelelo yabo xa befumana impendulo eyiyo.
ibizwa ngokuba yintoni isikhwenene somntwana
Ukufumana ubuninzi bethiyori kuyabandakanyeka ngaphezu kokudibanisa amaxabiso edola kuyo yonke imibuzo ngenxa yokubheja okuvunyelweyo yiDaily Doubles kunye nomjikelo wokugqibela weJoopardy. Umdlali onethamsanqa ngokwaneleyo ukubetha zontathu iiDaily Doubles kwithiyori ephindaphindwe amatyeli amane kumdlalo ngeNgozi yokuGqibela ibe lithuba lesine.
Enye into kukuba yonke imibuzo engama-30 kwimijikelo emibini yokuqala kuya kufuneka iphendulwe, engasoloko isenzeka ngenxa yewotshi yomdlalo. Iirandi zihlala ziphela ngemikhondo esebhodini, kodwa akusoloko kunjalo. Siza kucinga ukuba oyintshatsheli yethu yethiyori ufumana yonke imibuzo engama-60 kwaye zonke iimpendulo zichanekile.
Ngokumalunga nexabiso ledola ngokwalo, kumngcipheko weJeopardy ixabiso lazo zonke izikhombisi ezingama-30 zilingana ne-18,000 yeedola, kodwa khumbula ukuba kufuneka sishenxise ixabiso kumbuzo omnye weDaily Double. Sisusa isikhombisi se- $ 200 kuba isusa elona xabiso lincinci kwimali enokubakho. Ukuba umntu okhuphisana naye onethamsanqa afumana yonke i-29 yeminye imibuzo engeyiyo eyemihla ngemihla echanekileyo baya kuba ne- $ 17,800 abanokuyiphinda kabini kwisikhokelo sokugqibela (seDaily Double) yomjikelo weedola ezingama-35,600.
Imikhombandlela ejikeleze ubuNgozi eyi- $ 36,000 (ephindwe kabini kunaleyo isengozini) kodwa kufuneka sisuse iidola ezingama-400 kwiiDaily Doubles. Oko kuthetha ukuba umgqatswa wethu ophumeleleyo uza kuba ne- $ 70,800 emva kokuphendula imibuzo engama-28 engeyiyo yemihla ngemihla kabini kumjikelo. ($ 35,200 ukusuka kumjikelo ophindwe kabini weJoopardy kunye ne-35,600 yeedola eqhutyelwe kumjikelo weengozi.
Ukuba baye kabini i-True Daily Doubles ngokulandelelana nge-70,800 yeedola, banokuphinda-phinda ukuya kwi- $ 283,200 ukuya kumjikelo wokuGqibela ngeNgozi apho baphinde banethuba lokuphinda-phinda impumelelo yabo.
Ke, ngokwemiqathango Ubungozi! abalandeli baya kuqonda:
Eli lilonke inani lemali elinokwenzeka ngokwezibalo ukuba liphumelele kumdlalo omnye we Ubungozi!
UCharlie chaplin ixesha lokuhamba ngoncedo lokuva
Yintoni i $ 566,400 yeAlex?
Ukuba kunokwenzeka ukuba kucace isiqingatha sesigidi seedola kwimbumbulu enye, kutheni irekhodi liyi- $ 77,000 kuphela?
Kungenxa yomdlalo weDaily Doubles. Ukubetha ubuninzi obugqityiweyo, umdlali akadingi ukubetha zontathu iiDaily Doubles, kufuneka azibethe okokugqibela kunye neenkcukacha ezisezantsi ebhodini. Yiyo i-200 yeedola kumngcipheko weJoopardy kunye ne-400 yeedola kwi-Double Jeopardy. Ngemikhondo engama-30 kumjikelo ngamnye, kunye neendidi ezintandathu ebhodini, amathuba okuba zontathu iiDaily Doubles zikwiindawo ezinamaxabiso asezantsi kwaye zikhethwe okokugqibela azintle.
Kumjikelo weJeopardy kukho i-1 kwi-5 (i-6 ngaphandle kwe-30 ngokwenyani) ithuba lokuba iDaily Double yenye yemibuzo enexabiso eliphantsi, kunye ne-1 kuma-30 ithuba lalo naliphi na icebo lokuba lelokugqibela ebhodini, ke amathuba isikhombisi sokugqibela ebhodini elona xabiso lisezantsi KUNYE neDaily Double kumjikelo weJeopardy yi-1 kwi-150.
Amathuba e-Double Jeopardy amabi ngakumbi, kuba ufuna ezi zinto zimbini zeDaily Doubles ukuya KUNYE nokuba ibe lelona xabiso liphantsi KUNYE ezimbini zokugqibela ezikhethiweyo. Unethuba eli-1 kwayi-12,615 yamathuba wokuba kunjalo kwimeko yesibini. Hlanganisa loo nto kunye nemfuno yokuba umjikelo weJeopardy uphele nakwiDaily Double kwaye amathuba okuba yi-1 kwi-1,892,250. Oko kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba uphumelele ubuninzi bemali eyi-1 kuyo yonke imidlalo eyi-1,892,250 ye Ubungozi! idlalwe.
Ngodliwanondlebe lwe-Trebek, Ubungozi! Iqhuba imiboniso emihlanu ngeveki iiveki ezingama-46 ngaphandle konyaka zizonke ezingama-230 zemiboniso minyaka le. Oko kuthetha ukuba kwishedyuli yangoku yokubonisa eli thuba livela kube kanye kwiminyaka eyi-8,227.
luhlaza laci terf
(nge IPodcast yeNerdist ndinombulelo okhethekileyo kuBrian Tickle ngokuba ngumcebisi wam wezibalo, umfanekiso nge Ubungozi! )
Zithini iingxaki zeenkawu ezili-100 ezibhala ngokwenyani Hamlet ?
Ixabisa malini imali eyi-Monopoly kwimali yase-US?
Inzululwazi ityhila isitshixo sokuwina iLiwa, iPhepha, iSikere
Ilizwi Elithe Cwaka
Ukungqubana kraki kwezihloko
ibuzzfeed ingasonjululwanga ibuya nini
Umbane wokugqibela kamnandi u-louis vuitton
Utata kunye nonyana abalinganiswa bekhathuni
Ngaba ikorra kunye ne-asami canon
udlwengulo lomfazi omangalisayo
ukuzanga kwi-rose cocaine